Umkhiqizi Nomthengisi we-China Quartz Powder | I-Dinglong
I-quartz powder yethu ingaphezu kuka-99.3% wamakristalu futhi inokungcola okuphansi kwe-ionic nokukhishwa kwe-alpha ray ephansi. I-Quartz powder inikeza anhlobonhlobo izakhiwo ezibonakalayo, ezisebenza ngomshini nezishisayo. Itholakala kuzo zombili izinhlayiya nosayizi owenziwe ngokwezifiso ukusatshalaliswa.
Ukubukeka: impuphu emhlophe
Ukungcola kwe-ionic okuphansi nokukhishwa kwe-alpha ray ephansi
I-chemistry ehambisanayo nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezilawulwa ngokucophelela
I-Dinglong quartz powders iyimpuphu esetshenziswa ku-elekthronikhi, i-quartz ware, i-refractory nezinye izinhlelo zokusebenza ezikhethekile. Ngenxa yokuhlanzeka okuphezulu kwe-quartz powder, ukuzinza kwamakhemikhali okuhle kakhulu nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezilawulwa ngokucophelela, ifunwa kakhulu ezimbonini ezahlukahlukene.
I-Dinglong quartz powders ingama-99.3% amakristalu. Ngobumsulwa obungu-99.3%, lezi powders ze-quartz zinokungcola okuphansi kwe-ionic, ukukhishwa kwe-alpha ray ephansi kanye namakhemikhali angaguquki. Ama-quartz powders ethu asetshenziswa futhi athenjwa ngamakhasimende ethu ekhaya nakwamanye amazwe ngoba izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuthembeka nokuvumelana, okusiza ukuqinisekisa ukusebenza komkhiqizo onokwethenjelwa nokuphindaphindwayo futhi okuholela kumkhiqizo we-quartz powder ongu-99.3% omsulwa. Ngakho-ke, amakhasimende ethu akwazi ukwakha ukwethembana nobungane nathi futhi ancike kwimikhiqizo yethu.
I-Dinglong iyakwazi ukukhiqiza izimpushana ze-quartz ngokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezihlukene ngokusebenzisa izigayo zebhola eziningana kusayithi. Ivumela ukuguquguquka kwemvelo ukukhiqiza impahla enebanga elibanzi lokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana. I-Dinglong silica powders iyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Lawa mpuphu we-silica akhiqizwa endaweni eqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini I-Silica Powder
Olandelayo: Ishubhu le-Quartz
I-Ground Quartz Powder
Uhlanzekile High Quartz Powder
I-Quartz Powder Iyathengiswa
Abakhiqizi be-Quartz Powder